Bangladesh, Famonoana mangina an-dry zareo · Global Voices teny Malagasy
Bangladesh, Famonoana mangina an-dry zareo
Voadika ny 14 Jona 2019 11:31 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2015)
Iray fanampiny indray ao anaty antontanisa
Hifoha afaka ora vitsy i Dhaka. Toy ireo Alahady hafa ihany, hanomboka miaraka amin'ny fo efa mahazatra sy aminà fifamoivoizana mitohana be ny fiainana. Miaraka amin'ny tahotra toy ny teo ihany, tsy an-kiteny, tsy misy zavatra vaovao hambara.
Araka ny nosoratan'i Nuhash Humayun, “nohazavain'i Pohela Boishak mazava tsara fa ity firenena ity dia toerana iray mampididoza ho an'ny vehivavy. Ny zavatra nanjo an'i Rajon sy izay nanaraka avy eo dia nampibaribary fa toerana iray ratsy ho an'ny ankizy ity. Ary mazava loatra, tsy misy toerana ho an'ireo mpisaina malalaka eto.
Sahala amin'ny hoe toerana iray mahafinaritra, azo antoka i Bangladesh, raha toa ianao ka lehilahy lehibe miozolmana.”
Ny sasany niezaka nilaza hoe “tsy azo raisina ho fisainana malalaka ny firesahana manohitra ny finoana.” Kanefa, ny finoana mahazo alàlana hiresaka momba ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra atao amin'ny anaran'Andriamanitra.
Vitsy an'isa iray fanampininy indray eny an-dalamben'i Dhaka, farafaharatsiny noho ny anarany. Mihorohoro ry zareo, hiala eto na ho ela na ho haingana. Miresaka ny antontanisa, niainan'ilay firenena ny fihemorana niainga avy any amin'ny 28% ho an'ny taona 1980s tonga any amin'ny 8% tamin'ny 2014. Mbola ambany lavitra noho izany aza ny fijeriko manokana. Nahoana moa ry zareo no tsy ho izany? Taorian'ireo fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 2001,naolan'ireo lehilahy avy amin'ny BNP-jammat izay rehetra vehivavy, tafiditra amin'izany ny ankizy, ny zokiolona ary ireo manana fahasembanana ara-batana ao amin'ireo vohitra Hindou telo ao Bhola, ary tsy nisy fitsaràna hatramin'izao!
Lasa aho nandeha, ho toy izany koa ireo hafa. Toy izao izany, hoy aho, no fandehany. Saingy, hanampy ve izany? Hanavotra ny aiko ve izao? Hanavotra ny ain'ireo hafa ve? RAHA mijanona tsy manoratra ireo bilaogera rehetra, hanakana ireo vono olona misesisesy ve izany? Maloka raha ny valiny azoko avy amin'ny tenako ihany.
Araka ilay filaza malaza nataon'i Martin Niemoller ,
“Voalohany indrindra dia tonga ho an'ireo sosialista ry zareo, dia tsy niteny aho—
Satria aho tsy sosialista.
Avy eo ry zareo tonga hitady ireo mpikambana anaty sendikà, dia tsy niteny aho—
Satria aho tsy mpikambana anaty sendikà.
Avy eo ry zareo tonga ho an'ireo Jiosy, dia tsy niteny aho—
Satria aho tsy Jiosy.
Avy eo ry zareo tonga ho ahy—dia tsy nisy tavela intsony, na iza na iza, mba hiteny ho ahy.”
30 Jona 2021Mediam-bahoaka